Sida ay xiisadda Venezuela isugu baddali karto dagaal caalami ah - BBC News Somali
Image caption Maduro ayaa ku eedeeyay Mareykanka iney isaga afgambinayaan
Xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan gudaha waddanka Venezuela ayaa halis ugu jira iney isu rogaan kuwo caalami ah, maadaama ay dalalka ugu quwadda weyn caalamka kala taageersan yihiin dowladda iyo mucaaradka dalkaas.
Ruushka iyo Shiinaha oo taageersan Maduro
Maalintii khamiista ahayd, xukuumadda Moscow waxay ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta dhawaaqa Guaido uu isugu magacaabay xilka madaxweynaha, waxayna arrintaas ku tilmaantay "mid si toos ah u horseedeysa in sharciga lagu tunto oo la banneysto daadinta dhiigga".
Banaanbaxyo gilgilay Venezuela
Wadahadallada Venezuela oo fashilmay
Dad lagu xirxiray Venezuela
Image caption Shiinaha ayaa garab taagan madaxweyne Maduro
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri: "Waxaan ka digeynaa tallaabada noocaas ah ee qallafsan, taasoo horseedi karta cawaaqib aad u xun".
Dhanka kale, isla maalintii khamiista ahayd, af hayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, Hua Chunying ayaa shir jaraa'id ku sheegay in Shiinuhu uu ka soo hor jeedo faragalinta shisheeye ee ku lifaaqan xiisadaha ka aloosan dalka Venezuela.
"Shiinuhu wuxuu taageersan yahay dadaallada ay dowladda Venezuela ugu jirto iney ku ilaaliso qaranimadeeda iyo madaxbannaanideeda isla markaana kusoo celineyso xasiloonida", ayuu yiri Hua Chunying.
Venezuela oo xiriirka u jartay Mareykanka
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @SecPompeo
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 Bisha Koobaad 2019
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @SecPompeo